Sony ga-eme ka PS One na PS2 egwuregwu na PS4 - News Ọchịchị
Sony ga-eme ka PS One na PS2 egwuregwu na PS4
N'adịghị ka PlayStation 3 (PS3) emulation, nke ga-kwadoro remotely on ọhụrụ PlayStation Ugbu a online ọrụ, egwuregwu n'ihi na mbụ consoles na Sony si PlayStation Canon ga-sụgharịrị na mpaghara site na otu emulation engine.
Dabere na Eurogamer, na emulators ga-bụghị naanị mụta nwa classic egwuregwu nke gara aga, kamakwa upscale ha n'ụzọ na-agaghị eduga ha n'ịghọ blurry ọgbaghara dị ka n'oge gara aga. The echiche maka “HD remaster” na ada ga-abụ ihe mara mma ka ndị ọrụ karịa ígwé ojii ọrụ na a na-eji na-akwado PS3 egwuregwu.
A na-eche na utu aha ga-abịa na PlayStation Network na oge, na na ọtụtụ n'ime atụmatụ a ga-replicated na PlayStation Ugbu a. Otú ọ dị, n'ihi na ala na ihuenyo definition nke okenye egwuregwu, ọ ka mkpa iji ụba n'ike nke PS4 imelite egwuregwu ka ọtụtụ dị mma.
Nke a na-eduga ná ajụjụ, ma ọ bụrụ na Sony na-eme nke a ruo Ọgbọ console egwuregwu, gịnị mere ya mbọ ka a ígwé ojii ọrụ n'ihi na PS3 utu aha? O doro anya azịza ya bụ ego, dị ka ọ bụ ohere maka Fans onye nti ido Sony extolls na ya ugbu PS4 oziịchụnta ahịa iji kwụọ ụgwọ maka egwuregwu na-ewu ewu PS3 nile ọzọ.
Dị ka Moodys belatara Sony si n'aka ọnọdụ junk, na Japanese technology ibu na-achọta ihe n'ụzọ na-capitalize na-eguzosi ike n'ihe fanbase nke ya PS3 egwuregwu consoles. Ka ọ dịgodị, ikpo abaghị uru PS3 ngwa anya discs-awụba n'oké osimiri ọrụ ebere ụlọ ahịa na UK. m
Akụkọ a, Sony ga-eme ka PS One na PS2 egwuregwu na PS4, na-syndicated si The Inquirer na-ezitere ebe a na ikike.
27506	2 List of PlayStation 3 egwuregwu, PlayStation, PlayStation Network, Sony
← Teen onyeisi ikpe na-agba akwụna Ring 25 -Eche Foods mbo mbuli gị Metabolism →